१ बर्ष देखि अस्पतालमा श्रीमती अनिताको उपचार गर्दै आएका बिनोदलाई भिख मागेर उपचार गर्ने भन्ने आरोप लागेपछि, बिरामी अनिता रोईंन (भिडियो) – Dainik Sangalo
November 22, 2020 285
Prevअब ब,ला,त्का,रमा मिलापत्र गराउनेलाई पनि फौजदारी मुद्दा लाग्ने – सरकारले ल्यायो अध्यादेश
Nextनेपाल प्रहरीका पूर्वडीएसपी श्रेष्ठ बेलायत प्रहरीको एडभाइजरी बोर्डमा नियुक्त हुने पहिलो नेपाली
हालसम्म नेपालमा ३ सय ६९ प्रहरीमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि,१ सय ४९जना निको भएर घर फर्के
दशैमा मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो महत्त्वपूर्ण सुचना: भोलि बाट ७७ जिल्लामै यस्तो हुने ।
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126295)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64053)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (54828)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (49888)